Ayax, aphids, aboor aboor, iyo cayayaanka. Cayayaanka ugu sareeya xilliga 2020 - Nidaamka Baradhada
Shirkadda Agoosto ayaa qortay cayayaanka ugu khatarta badan ee halista ku ah goynta 2020-ka. Xilligaan waxaa diiradda la saaraa sidii ayax, aphids, Baalallay cawska iyo caarada hadhuudhka. Faafidda cayayaanka waxaa fududeeya qaboojiyeyaasha khafiifka ah, kuwaas oo ka sii kululaanaya. Isla mar ahaantaana, sanadkan, beeraleyda ayaa laga badbaadiyey qaar badan oo masiibo ah oo sababay waxyeelo soo gaarta dalaga beeraha sanadka 2019: burdocks, sababtuna tahay guurguurkii weynaa oo ka socdey dhul ilaa duulimaad, gawaarida wadooyinka ayaa galay qalfoof, xawaash suufka ah oo dagan gudaha cobs, iyo waxa ugu weyni waa aboorka kaabashka, kaas oo dadkiisu kordhayaan ay joojin karaan beeritaanka rapeseed ee waddankeenna. Soo-saarista Lepidoptera waxaa xaddiday barafkii Abriil ee koonfurta Ruushka.
Iyadoo laga soo horjeedo asalka duulaanka lama filaanka ah ee ayax ee ku sugan Africa, Aasiya iyo Bariga Dhexe ee Russia, gobollada Koonfurta iyo Waqooyiga Caucasus waxay ku midoobeen dagaalka ka dhanka ah cayayaanka khatarta ah: Stavropol, Kalmykia, Dagestan, Chechnya, Astrakhan, Volgohan iyo gobollada Rostov. Dhulkan Ruushku waa nooc ka mid ah soohdinta waqooyiga, oo ayax “shisheeye” ay u duuli karto oo ay halkaas ka bilaabi karto.
Dmitry Belov, oo ah madaxa horumarinta waxsoosaarka ee 2020 ayaa lagu xusay gobollada Stavropol, Kalmykia, Dagestan, Volgograd iyo Astrakhan, - Si kastaba ha noqotee, dillaaca iyo cawaaqibkiisu waa waxyaabo kala duwan, iyo guud ahaan sannadkan waxaan ku guuleysanay inaan ula tacaalno ayax. Cudur dillaac ayaa loo duubay natiijada kormeerka: asal ahaan, waa moodel lagu dhisay salka xogta dhabta ah, oo lagu taageeray macluumaadka ku saabsan xaaladaha cimilada iyo la socoshada xogta laga helo gobollada ay ayaxu uga guuraan. Haddii Aasiya, Bariga Dhexe, Afrika, koritaanka ayaxu uu bilaabmaa, sida sanadkaan, ka dib way cadahay inaan sidoo kale u baahan nahay inaan isku diyaarinno. ”
Korjoogteynta waxaa lagu fuliyaa iyadoo la adeegsanayo qodista ciida meelaha ay ayagu ku yaalliin. Sida caadiga ah, kuwan waxaa ka mid ah alwaaxyo, godad, durdurro, dhuuban cawsduur ah oo meel qoyan leh. Khubaradu waxay raadinayaan ayax “nuggets”, waxay ogaan karaan dirxiga, xaalada ugu daranna, waxay duubtaan duulimaadka - markii ayax baaxad leh ay ku soo korodho baalasha. Ayax faafida waxaa badanaa lagu xukumaa iyada oo lagu daaweynayo meelaha cudurka qaba sunta cayayaanka kahor duulista. Sidaa darteed, dillaaca wuu weynaan karaa, waxyeelana u geysan kartaa beeraha - ugu yaraan. Shirkadda "Agoosto", gaar ahaan, waxay xusayaan in sannadkan ay calaamad u yihiin waxyeellada ka soo gaarta dalagyada ayax ee gobollada Stavropol iyo Volgograd.
Dhowr sano oo isku xigta, aphids-ka waxay dhibaatooyin u geysanayeen soosaarayaasha beeraha ee Ruushka, iyagoo waxyeeleynaya dalagyada gabbaldayaha, galleyda, digir iyo dalagyo kale. Sida laga soo xigtay khubaro August, aphids waxay sababi karaan waxyeelo weyn, maadaama ay muujinayaan iska caabin ku saabsan sunta loo yaqaan 'pyrethroid' iyo sunta cayayaanka neonicotinoid - gaar ahaan gobollada koonfurta, halkaas oo cimilada kulul ee neonicotinoids ay ku adag tahay inay ku dhex socdaan gudaha dhirta oo aan la gaarin hadafkooda. Sidaa darteed, khubaradu waxay ku talinayaan in la isticmaalo sunta cayayaanka loo yaqaan 'organophosphate sunta' ama isku-darka walxaha ka-hortagga cayayaanka Sanadkii 2020, aphids-ka ayaa saameyn ku yeeshay dalagyada gobollada Voronezh iyo Kursk, ee Tervropol Territory iyo Dhulka Altai.
Sixirooyinka madow ee aboorka iyo cawska - cayayaan kale oo walwal ku haysa beeralayda iyo dadka deegaanka xagaaga xilligan - waxay doorbidaan dhirta da 'yar, oo leh caleemo jilicsan. Xagaagan, tirada bislaadahan ayaa ka badan sidii caadiga ahayd. Tani waxay si gaar ah looga dareemi karaa gobolka Novosibirsk, ee gobolka Altai, ee ku yaal qayb ka mid ah gobolka Krasnoyarsk iyo gobolka Omsk.
“Gobollada Bartamaha Madoowga Dhexe, tusaale ahaan, waxay horayba u barteen aboor bariis ah, halkaas dhibaato weyn kuma ahan beeraleyda. In kasta oo aan, gaar ahaan, aragnay sida, maqnaanshaha daaweynta leh diyaarinta sunta cayayaanka ee gabbaldayaha, warshadda ayaa wali kacsan, gebi ahaanba caleemo qulqulaya. Dmitry Belov wuxuu yiri: "Dagaalka ka dhanka ah aboorka jilicsan, haddii waqtigiisa lagu helo, wax adag maahan: waxaa si wax ku ool ah loogu burburin karaa iyadoo la kaashanayo tiro daawooyin ah, oo ay ka mid yihiin" pyrethroids ", ayuu yiri Dmitry Belov.
Jiilaalka diiran ee Russia awgeed, tirada dadka ku ridaysa qamadiga ayaa sii kordheysa. Hadhuudhka xilliga qaboobaha (lugta-cas) waxay si daran wax u dhimaysaa qulqulka qamadiga jiilaalka. Sanadka 2018-2019 waxay si gaar ah ugu badanayd gobolka Stavropol, Krasnodar Territory, iyo Gobolka Rostov, sanadkaanna waxaa laga diiwaan geliyey xitaa koonfurta gobolka Voronezh. Cayayaanka qalleyda ayaa ah caarada microscopic kaas oo sidoo kale waxyeelleeya qamadiga jiilaalka, laakiin cabirkiisa awgeed, dhibco huruud ah oo caleemaha ku jira ayaa had iyo jeer ku qaldama soosaarayaasha beeraha inay u keenaan cudur ku dhaca fangas ama cudurka cimilada. Waagii hore iyo sanadkii kahoreeyey tii ugu dambeysay, faafitaanka dadka cayayaanka ah waxaa laga diiwaan geliyey Jamhuuriyadda Bashkortostan, Altai, gobolka Novosibirsk, gobolka Kurgan, illaa xad aad u yar gobollada Sverdlovsk iyo Chelyabinsk. Sanadkii 2020, mar labaad ayaa laga helay dhulka Bashkortostan. Sannadkan, gobolka Voronezh, saxarku wuxuu si xoogan u saameeyaa hadhuudhka, soybeanska, xididdada.
Isla mar ahaantaana, shirkadda Agoosto waxay sheegaysaa in qabow daran uu ka jiro gobollada koonfurta dhammaadka Abriil oo keliya ma uusan dhaawicin dalaggii, kaas oo sababay dalag yaraanta sannadkan, laakiin wuxuu sidoo kale xaddiday waxqabadka cayayaanka badan. Marka horeba - aboor baa ku jira kaabashka, kaas oo waxyeelo weyn u gaysatay dalaggii kufsiga guga shantii sano ee la soo dhaafay. Sanadkii 2020, wax faa iido ah tiradooda lama diiwaangelin.
Muddadii u dhexaysay 2015 illaa 2019. Dalkeena, deegaanka kufsiga guga wuxuu ka kordhay 1 milyan oo hektar ilaa 1,5 milyan, ayuu yiri Dmitry Belov. - Beeraley badan ayaa bilaabay inay soo bandhigaan rapeseed qaab dhismeedka wareegga dalaga, maxaa yeelay waxaa si firfircoon loogu dhoofiyay suuqyada Yurub iyo Shiinaha labadaba qaab hadhuudh iyo nooc saliid ah. Waqtiga qaar, xitaa waxay ku guuleysteen inay tuujiyaan qaar ka mid ah soosaarayaasha Yurub. Si kastaba ha noqotee, xaaladdu waxay soo faragelisay aboorka kaabashka - cayayaanka waligiis ku sugnaa Russia, laakiin tirada sii kordheysa waxaa sidoo kale ka dhashay qaboojiyeyaasha diiran iyo koror degdeg ah aagagga roobka.
Sida ay u egtahay aboorka kaabajka ayaa ah in inta lagu jiro xagaaga, qarniyo badan oo cayayaan ah ayaa isku beddeli kara isla meeraha - si ka duwan, tusaale ahaan, ayax. Isla mar ahaantaana, ukunta cayayaanka, dilaaga, pupae, iyo dadka waaweynba waxay ku dhici karaan isla dhul isku mid ah. Sidaa darteed, beeraley badan ayaa ku qasbay inay fuliyaan daweynta sunta sunta dilaaga ah ilaa 6 jeer xilli ciyaareedkii, iyo baahida loo qabo jagooyinka qaar ee sunta sunta lagu buufiyo ee suuqa ayaa kordhay 400-500%. Khabiirka shirkadda "Agoosto" waxay xusayaan in qayb ka mid ah soosaarayaasha beeraha dhammaadka 2018-2019. xitaa waxay go’aansadeen inay ka baxaan wax soo saarkii rapeseed, maadaama kuwa fulin waayey daaweynta ay waayi karaan dalaga gebi ahaanba, iyo kuwa ilaaliya, iyada oo ay ugu wacan tahay qiimaha sunta cayayaanka, ayaa si weyn hoos ugu dhacday macaashka.
Sannadkan, faafitaanka waxqabadka cayayaanka noocan oo kale ah sida buskudka burdock ayaa sidoo kale aan la diiwaangelin, halka sanadkii hore ee dilaaga ah, sida caadiga ah tiro ahaan iyo quudinta inta badan haramaha, dalaggii burburay ee Gobollada Stavropol, Kuban, ee gobollada Rostov iyo Voronezh. Wadooyinka ay u badan yihiin kuwa siiryaarradu uga soo guureen bannaanka iyo duurka iyaga oo raadinaya saldhig xero, ayaa gawaaridu si fudud ugu gudbi karaan qalcad. Intaa waxaa sii dheer, gobolka Stavropol sanadkan ma lahan dhunkashada suufka - siisay ballac ballaadhan oo farta ay sanadkii hore waxyeello u gaysatay soybeanska, galleyda, gelitaanka gudaha cob, iyo xitaa beero canab ah. Xaaladda cayayaanka marmar ayaa soo ifbaxday sanadkii 2020, kaasoo sanadihii ugu dambeeyay sababay dhaawac culus jardiinooyinka koonfurta iyo dhir magaalooyinka - tusaale ahaan Sochi.
"Xaaladda leh cayayaanka badan ayaa isbeddelay: xaaladaha cimilada iyo qodobo kale oo aan wali qiimeyn saynisyahano - laakiin waxaan u maleynayaa inay tahay cimilada markii ugu horreysay - waxay horseedeen xaqiiqda in cayayaan fara badan oo cayayaanka ah ay run ahaantii maqan yihiin sanadkan. Kama reebanaan in dadkoodu ay hoos u dhici lahaayeen talaabooyinka ilaalinta ee la qaaday, - Dmitry Belov ayaa aaminsan. Si kastaba ha noqotee, guud ahaan, cimilada ayaa sii wadi doonta inay isbeddesho, waxaanna yeelan doonnaa dhibaatooyin badan oo cayayaan ah. Caqabadda haysata shirkadaha annaga oo kale ahi waa inay horumariyaan tikniyoolajiyadda dalagga isla markaana ay soo bandhigaan qalab cusub oo xakameyn ah. "
Waxyaabaha ay bixiso adeegga saxaafadda ee shirkadda "Agoosto"
Tags: "Agoosto"isbedelka cimiladacayayaanka